Isixhobo sokuhluza amanzi → Izixhobo zokuhambisa amanzi ezingenasilinda
Ngokwandayo kwiinkampani iiofisi, iiofisinkqu nakwi izindlu ngasese kuvela Ukucoca amanzi okuhambisa amanzi. Namhlanje isixhobo sokuhambisa amanzi ibonelela ngamanzi amnandi nabandayo, ashushu kunye namagumbi okusela, kuxhomekeka kwimodeli yesixhobo esikhethiweyo kunye neemfuno zabantu abazisebenzisayo.
Isixhobo samanzi esenziwe ngekhabhoni Igqibelele kokubini kwiindawo ezivulekileyo, indawo zokusebenzela ezivaliweyo kunye namaziko oluntu, kunye nakumakhaya abantu, okt naphina apho umgangatho wamanzi ubalulekile.
Abavelisi bemithombo yamanzi okusela abafumanekayo kwimarike bazama ukufikelela kwelona nqanaba liphezulu lomgangatho kunye nokunambitheka kwamanzi alungisiweyo ngokusebenzisa izisombululo zetekhnoloji entsha. Kwangelo xesha, bakhathalela uyilo lwala maxesha lwesixhobo oluya kulingene nakweliphi na igumbi. Uncedo olongezelelweyo lwezixhobo ezichazwe apha amanzi I-carbonated ikwasebenza kwawo okuphezulu.
Kuxhomekeka kwiimfuno zakho, sinokukhetha kwizixhobo ezikumgangatho ophezulu wokulungiselela amanzi abengezelayo:
Hi-Class isilinda-samahhala samanzi sokuhambisa amanzi yenzelwe kwaye ijolise ekusebenziseni izinto ezahlukeneyo zangaphakathi, apho ingesosisixhobo esisebenzayo kuphela, kodwa ikwahombisa indawo ebekwe kuyo.
Esona sisombululo setekhnoloji sanamhlanje sisetyenzisiweyo kuyilo kunye nasekwenzeni esi sixhobo kunye nokusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni ophezulu kwimveliso yazo kuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo komhambisi kunye nokusebenza kwayo okuphezulu.
Isixhobo sokuhambisa amanzi esiku-Hi-Class sinokulungiselela ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-45 zamanzi abandayo kunye nabenyezelayo ngeyure ukuya kwi-13 yeelitha ngeyure yamanzi ashushu.
Umatshini ubonelela ngeendlela ezine zamanzi amnandi.
Amanzi alungisiweyo angabanda, ashushu okanye iqondo lobushushu kwigumbi, nawo angacwecwe umoya.
Amanzi amnandi kunye asempilweni alungiswe sisixhobo se-Hi-Class anokugalelwa ngqo kwiinqanawa eziphakamileyo ezahlukeneyo. Oku kunokwenzeka ngenxa yofakelo lwesipout esitshintshiweyo kwisixhobo.
Indibaniselwano yeglasi yesipili esimnyama ngaphambili kwesixhobo ngentsimbi engenasici kunye nolawulo olugqithisileyo lobugcisa likuvumela ukuba wenze uyilo lwangoku olungena kuyo nayiphi na ingaphakathi, ngelixa kwangaxeshanye lihamba kunye neepropathi eziphezulu zokusebenza kwesixhobo.
Isixhobo samanzi esasimahla se-Pro-Stream
Isixhobo samanzi esasimahla se-Pro-Stream Ikuvumela ukuba ulungiselele amanzi abandayo, ashushu kunye ahlwahlwazayo ngexesha elifutshane, elibonakaliswa kukungcamla okugqwesileyo.
Umhambisi wePro-Stream ubonakaliswa kuyilo lwangoku kunye nokusebenza okuphezulu, kwaye enkosi kwikholamu efakwe ngobushushu kunye nepaneli yolawulo lokuchukumisa, umhambisi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Umsebenzisi uxelelwe ngokucacileyo malunga nenqanaba lokusebenza kwesixhobo ngenxa yemiyalezo ebonisiweyo.
Isixhobo sokuhambisa sePro-Stream sinokusebenza kunye nebhoyila, ukupholisa okanye inkqubo yegesi. Ndiyabulela kwinkqubo yokulawula indlela yokusebenza kwesixhobo, kunokwenzeka ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ngokuzenzekelayo.
Amanzi anokufudumala kwi-98 ° C aphakunye nokusebenza kwecebo kukuvumela ukuba ugcwalise ukuya kwiikomityi ezingama-215 ezinamandla angama-250 ml ngeyure. Uncedo lwesi sixhobo ke kukukwazi ukulungiselela ngokukhawuleza zonke iziselo ezishushu.
Ukukhethwa kokulungiselela amanzi abandayo kunye nokubengezela kunika ukuya kwi-15 yeelitha zamanzi ngeyure.
IJ-Class abahluzi bamanzi
IJ-Class abahluzi bamanzi zibonakaliswe ngowona mgangatho uphakamileyo ufumene umbulelo kusetyenziso lwetekhnoloji yale mihla, eqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo kunye nokusetyenziswa okuthe kratya kwesixhobo.
Ezi zisasazi zisetyenziswa ngokuzithandela eziofisini, kwiindawo zentselo, iivenkile zokutyelanakumakhaya abantu. Bona ziveliswe ezahlukeneyo ezimbini:
Umahluko ophezulu-isixhobo esonyuka ngaphezulu kwetafile
-Ukukhetha IN - ukunyuswa phantsi kwetafile ephezulu.
Umatshini ulungiselela iindidi ezine zamanzi:
kushushu ngamaqondo obushushu ukuya kuthi ga kuma-98 ° C
Umhambisi we-J-Class unamandla amabini: iilitha ezingama-30 zamanzi alungisiweyo ngeyure kunye neelitha ezingama-45 zamanzi ngeyure.
Isixhobo samanzi esingenasilinda seNiagara Phezulu sisixhobo esomeleleyo kakhulu, esisebenzayo nesithembekileyo esilungisa amanzi amnandi namnandi, ahlangabezana nemigangatho ephezulu, enokusetyenziswa ngempumelelo kwiiofisi, kwiindawo zokusebenza nakwiiofisi.
Umhambisi oPhezulu waseNiagara uya kukunceda usombulule nayiphi na imiba ephathelene nokuhanjiswa kwamanzi kunye nokugcinwa, kunye neebhotile zeplastiki ezingenanto. Ngombulelo kwesi sixhobo sobuchule, kunokwenzeka ukubonelela abasebenzi kunye nabathengi ngamanzi amnandi nasempilweni, ngaphandle konikezelo oluqhubekayo lwamanzi asebhotileni.
Esi sixhobo senzelwe ukuba sisetyenziswe kuzo zonke iindawo zikawonke-wonke, siqinisekise ukuba akukho ngxaki xa usasaza isixa esikhulu samanzi ahlwahlwazayo nawamileyo, ukuvumela ukuba ugcwalise ngokukhawuleza zonke iintlobo zeenqanawa kunye nokunciphisa iindleko zokubonelela nokugcina amanzi okusela.
Isixhobo sokuhambisa amanzi esingenasilinda esingena-DRINK TOWER sisixhobo esifanelekileyo sokulungiselela isixa esikhulu samanzi abandayo asempilweni kwaye amnandi, omabini ahleliyo kwaye ekhazimla. Esi sixhobo silungile kwicandelo lokutya, kwimivalo, kwiivenkile zokutyela nakwiihotele, okt naphina apho kufanelekileyo ukulungiselela isixa esikhulu samanzi okusela akumgangatho ophezulu ngexesha elifutshane.
Esi sixhobo sinokudityaniswa nayo nayiphi na inkqubo engaphantsi kwe-counter.
Umhambisi weDrink TOWER wenziwe ngezixhobo ezisemgangathweni ophezulu, eqinisekisa ukusebenza okude, okungenangxaki. Uyilo lwayo luvumela ingqokelela yezempilo yamanzi okusela alungisiweyo.
Isixhobo samanzi esingenasilinda se-H2O sam sisixhobo sanamhlanje esenzelwe ulungiso lwengqele kunye nencasa, amanzi okusela ashushu kunye nekhabhonikhi, kunye namanzi kubushushu begumbi. Ubungakanani beCompact, uyilo lwangoku kunye nokusebenza okunomdla zizinto ezilungileyo kwesi sixhobo, ezifumaneka kwiinguqulelo ezimbini:
- itheyibhile ephezulu - TOP
-kwi-counter-counter kunye nespout-IN
Ngo-9 lIsicoci samanzi esingasilinda-silindaisixhobo sokuhambisa amanzi sasekhayaisitshisi samanzi sasekhayaisitshisi samanziI-5l yokuhambisa amanziisixhobo esikhupha amanziixabiso lokuhambisa amanziinto yokuhambisa amanzi abantwanaisasazi sokuhambisa amanziogalela amanzi Warsawisasazi yokuhambisa amanzi ashushuisitshisi samanziI-5l yokuhambisa amanziIsixhobo samanzi seAllegroisitshisi samanzi esingenabhotileixabiso lokuhambisa amanziIsipho sokuhambisa amanzi esipho sendaloIxabiso lendawo yokuhambisa amanziinto yokuhambisa amanzi abantwanaisitshisi samanzi eofisiniisitshisi samanzi sasekhayaixabiso lokuhambisa amanzi ekhayaisiselo sokuhambisa amanziisitshisi samanzi edenIncwadana yokuhambisa amanzi edenisitshabalalisi samanzi esitshiweyoIxabiso elikhanyayo lokuhambisa amanziIsicoci samanzi esitshixwayo ekhayeniisitshabalalisi samanzi ukuba isebenza njaniIsixhobo sokuhambisa amanzi iKrakowisimboli sokuhambisa amanzi amamineraliisixhobo sokuhambisa amanzi se-oasisIsixhobo sokuhambisa amanzi se-olxisiselo sokuhambisa amanziisixhobo esikhupha amanzi ngesiNgesiIsixhobo samanzi esiqhwithiisitshabalalisi samanzi kwifrijiisitshisi sokuhambisa amanzi kwifriji ukuba isebenza njaniogalela amanzi Warsawisixhobo esikhupha amanziImilinganiselo yokuhambisa amanziindawo yokuqesha amanziixabiso lokuhambisa amanziisiphumo sokuhambisa amanziisaphulelo sokuhambisa amanziisitshisi sokuhambisa amanzi kwifrijiumthengisi wamanzi ovela kwinethiwekhiohambisa amanziabahambisa amanzi beenkampaniAbasasazi bamamineraliAbasasazi bamanzi emithomboIsitshisi samanzi esinyeisixhobo sokuhambisa amanzi kwifrijiImpompo yamanzi i-5 yegalitha yokuhambisa ibhotile 18isixhobo sokucoca kunye nokuhambisa amanziisixhobo sokuhambisa amanziisixhobo segesi yokuhambisa amanziisixhobo sokugcwalisa amanzi ceneo
Jonga ezinye iindaba:
Ukufakelwa kombane kwamanzi